Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda - fianakaviana UWI Fund
Momba an'i Antigua & Barbuda
Passport Antigua sy Barbuda
Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda - fianakavian'ny Fund University of the West Indies (UWI)
Ny safidy University of the West Indies Fund (UWI) dia fomba iray hamatsy ara-bola ny oniversite faha-efatra an'ny UWI.
Ireo mpangataka ho an'ny olompirenena amin'ny alàlan'ny Fampiasam-bola izay misafidy io safidy io dia takiana hanao famatsiam-bola $ 150,000 US fianakaviana iray misy enina (6) na mihoatra (izany hoe ny isan'ny ambany indrindra amin'ny olona iray amin'ny fangatahana dia 6).
Ny fandraisana anjara amin'ny safidy dia ahafahan'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana iray herintaona, ny fampianarana fotsiny, ny mari-pahaizana ao amin'ny University of the West Indies.
Mahitsy ny fangatahana fampiharana ary azo raisina avy amina Agence licence eo an-toerana izay apetraky ny Citizenship by Investment Unit (CIU).
Aorian'ny fandefasana ny fangatahana ataonao dia angatahana ianao handoa manontolo. Ny fandoavam-bola 10% amin'ny sarany fanodinana dia azo ampiharina ho an'ny fianakavian'olona fito (7) na mihoatra. Rehefa nahazo taratasy fankatoavana ianao, dia angatahina handoa ny fifandanjan'ny saram-panjakana fanodinana governemanta ianao, ny saram-pasipaoro ary ny fandraisana anjara. Ny vola dia aloa mivantana any amin'ny Unit sy ny fandraisana anjara dia tsy maintsy atao amin'ny Tahiry manokana an'ny governemanta ao anatin'ny 30 andro.
Vantany vao voaray, ny taratasy fanamarinana fisoratana anarana momba ny zom-pirenena dia hatolotra ho an'ny mpangataka voalohany sy ny fianakaviany izay hatolotra ny Biraon'ny pasipaoro ho fanodinana miaraka amin'ny fangatahana pasipaorony sy ny antontan-taratasy miaraka. Rehefa vita io dia ny taratasinao / solontena nomenao dia hanolotra ny antontan-taratasinao momba ny pasipaoronao sy olom-pirenena.
Amin'ny fotoana voalohany nitsidihanao an'i Antigua sy Barbuda dia afaka manao fianianana na nanamafy ny tsy fivadihana ianao na afaka mitsidika masoivoho, Vaomiera ambony na Birao Consular any Antigua sy Barbuda hanatanteraka ny fepetra takiana amin'ny hanaovana ny fianianana na ny fanamafisana ny fanekena.
Fandraisana anjara amin'ny tahirim-bolan'ny University of the West Indies (UWI)
A. Ho an'ny fianakaviana 6: -
150,000 tapitrisa dolara amerikana (anisan'izany ny saram-panolorana)
B. Fianakaviana 7 na mihoatra: -
Fandraisana anjara $ 150,000 amerikanina
Sarany amin'ny fanodinana: 15,000 dolara amerikana isaky ny miankina amin'ny tsirairay
Miverina any Antigua sy Barbuda zom-pirenena
Olom-pirenena momba ny Antigua sy Barbuda Rohy haingana:
Fangatahana pasipaoro sy visa
Tatitra momba ny CIP 6-volana - 1 Jolay 2019 - 31 Desambra 2019
© 2020, Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda Powered by Shopify